25-ka Diseembar ma noqon doonto fasax qof walba. Iyadoo aan la tixgelin hudheelka, cuntada ama xaaladaha degdegga ah ama xirfadaha adeegyada caafimaadka, 9% haweenka shaqeeya iyo 2% ragga shaqeeya ee Faransiiska ayaa noqon doona lagu qasbay inuu shaqeeyo maalinta Christmas, sida lagu sheegay sahan * ay samaysay goobta Qapa. Kuwa la wareystay, 55% haweenka Faransiiska ah iyo 36% dadka Faransiiska ah ayaa sidoo kale diyaar u noqon doona inay ku shaqeeyaan 25 December, badanaa sababa lacag la aan.
Laakiin shaqabixiyuhu ma ku qasbi karaa shaqaalihiisa inay shaqeeyaan maalmaha kirismaska ​​iyo sannadka cusub?
Le Xeerka Shaqaalaha aqoonsan yahay 11 ciidaha sharciga ah, oo ay ku jiraan Diseembar 25 iyo Janaayo 1 (maqaalka L3133-1). Laakiin marka laga reebo 1-da Maajo, qasab maahan inay shaqeynayaan. Kaliya Alsace iyo Moselle ayaa leh nidaam gaar ah, marka loo eego ciidaha guud waa, haddii aan si kale loo qeexin, aan shaqeyneyn (maqaalka L3134-13 ee Xeerka Shaqaalaha).
Hubi heshiiska wadajirka ah
Meel kale, loo shaqeeyuhu wuxuu markaa sharci ahaan weydiisan karaa shaqaalihiisa inay yimaadaan shaqada December 25 iyo January 1 haddii uu u hogaansamo qodobbada qandaraaska. Lacalla…
Kirismaska, Sannadka Cusub: shaqo-bixiyahaagu ma kugu qasbi karaa inaad shaqeyso? July 10th, 2021Tranquillus
READ Waxyaabaha muhiimka u ah LinkedIn
horeSebtember 30, 2020 Qorshaha soo kabashada: waxaa loola jeedaa in lambar digbar laga dhigo tabobarka la siinayo
socdaFasaxa shaqaalaynta: muddada dheer ee la kordhinayo haddii ay dhacdo dib-u-tababar xirfadeed